नेजस अमेरिका, अधिवेशन र नेविसंघ – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
प्रकाशित: २०७४ फागुन ६ गते २०:१३
स्वतन्र बिद्धार्थी युनियनको चुनाव देखिन्थ्यो, कलेजमा – सहभागी भईन्थ्यो । अनेरास्ववियूका साथीहरु धाराको पानी, चिउरा र दालमोठ चपाउंदै रातदिन बिद्धार्थी सवालका बिषयहरुमा संगठित हुन्थे । तर नेविसंघ, रा.प्र.पाका बिद्धार्थी संगठनहरु संगठन विस्तार र चुनावी कामका नाममा निधारमा संगठनका फेता उन्थे र दारुले टिल्ल भएर मासुभात खान कलेज वरिपरिका भातखानाहरुमा मस्तिन्थे । भाग्यले लेखेका नतिजाहरु प्राप्त हुन्थे , नेविसंघहरुलाई ।
बिशेषत: जन्मदैं लागेको नेपाली कांग्रेसको यस्तो बिलासी बानीले सुधारको बाटो कहिल्यै लिएन । संगठन विस्तारका सुस्तता, कमजोरी र कार्यकर्ताहरुको बिलाशे बानीले पार्टीमा दिने लज्जाजनक परिणामलाई कांग्रेस र यसका वर्गीय संगठनहरुले ‘आफ्ना अनुशासनहिनता र पराजयका समिक्षा गरिएका बिषयहरु’ कहिल्यै माईन्युटिङ्ग गरेनन ।
शुरुवाती दिनदेखिको यो रोग क्यान्सर हुंदा कहिलेकाहींका उपचारहरुले अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस र बर्गीय संगठनहरु थल्लिएकाछन । पार्टीका डाक्टरहरुका बेला-बेलाका साधारण उपचारले सघन कक्षमा पुग्दै, आकास्मिक कक्षमा पुग्दै, सिटामोल खांदै ‘पुरानो र प्रजातान्त्रिक पार्टी हामी’ भनी श्वास मात्रै बांकी रहेको छ ।
हुंदा हुंदा पार्टी सरकारमा रहंदा उचित निर्णयका कमि-कमजोरी, यी यस्तै बिलासी र गुटबन्दीले चुनावमा नराम्रो पराजय भोगेको सिकिस्त अवस्थामा पनि प्रवासमा कांग्रेसका नाममा स्थापित भएका संगठनहरुमा चेत पलाएको छैन । निर्वाचन परिणाम, यसले सिकाएका असफलताका पाठहरुलाई परिमार्जन गर्नुका साटो, एकतामा बांधिनुका साटो, आपसी सहमतीमा अघि बढ्नुका साटो खुट्टा तान्ने, प्रपन्च रच्ने र समानन्तर समिती बनाउने सम्मका घटना र परिघटनाहरु उद्घाटित हुंदैछन ।
सबैले देखे, धेरैले लेखे, आ-आँफैं बाटो छेके, नेपाली जनसम्पर्क समिती अमेरिकाको बारेमा । अब केही लेख्यो, भन्यो र कोट्यायो भने लेखकलाई पाठक घट्ने त्रास, नेजसका नेतालाई भोट् घट्ने त्रास त समर्थकहरुलाई ईज्जतको त्रास छ । नेजसका जिम्मेवार नेताहरुले बारम्बार समयमै संस्थाको महाधिबेशन सम्पन्न हुनेछ भनेका कुराले हावा खाए । स्वदेशका पिडा र निर्वाचनमा सकृयताका कारण देखाएर पार्टीको पत्र नपठाई असुचित भएको महाधिबेशन सम्पन्न नभएका हिसावले नेपाली जनसम्पर्क समिती, अमेरिका अहिले अवैधानिक छ । नोभेम्बर २३ तारिख देखी यो संस्था बिधानत: सकिएको छ । पार्टीले वास्ता नगर्नु र जिम्मेवार नेताहरु शेरवहादुरजी वा रामचन्द्रजीहरुका नगिच हुने मात्रका कारणले नेजसको बैठक, उपस्थिती र महाधिवेशन मिती अनिश्चीत छ ।
हिजो एकै थालमा म:म: बांडेर खानेहरुको पानी बराबरको स्थिती छ भने हिजो पानी बराबरका स्थिती भएकाहरु एकै थालमा म:म: बांडेर खाने भएका छन । भन्थे, राजनीतिमा शत्रु र मित्रुको ठेगाना हुंदैन । नेजसको एउटा घटक अवधी सकिएको बर्तमान समितिका सभापतीले गराउने अधिबेशनमा कुनैपनी हालतमा सहभागी नहुने वताउंदै आएका छन भने सभापती पक्षधरहरु पार्टी सभापतीलाई जसरी पनि रिझाएर अधिबेशन सम्पन्न गराउने सुरमा छन । तर पार्टीले भोली बनाउन सक्ने ‘जनसम्पर्क बिभाग प्रमुखमा हुने नियुक्ती’ले दुबै पक्षका अडानहरु नपुग्न सक्छन । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका सव-निर्वाचित तथा नेकाको जनसंपर्क विभागका प्रमुखका रुपमा सम्भावित बलिया नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेजस अमेरिकाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी प्राप्त गरे भने, क-कसका सपना हावा हुने हुन, बादमा समयले बताउला ।
रिती र थितिले चल्नुपर्ने मानसिकताहरु गुटरुपी प्रश्रयले चलेपछी पद प्राप्त गर्न हौसाउनेहरु र पद प्राप्त गर्नेहरु त खुशी होलान, तर ईमान्दार कार्यकर्ताहरुलाई निराश बाहेक केही बनाउंदैन । सभापती देउवा र वरिश्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका खेमामा बकाईदा विभाजित नेपाली जनसम्पर्क समिती, अमेरिकाका विविध अमेल बिषयहरुसंगै पछील्लो अवस्थामा नेपाल बिद्धार्थी संघका नाममा ने वि संघ केन्द्रबाट पाएका नियुक्ती र आएका चिठीहरुले थप विवाद सिर्जना गरेको छ । देखिंदा सामान्य लाग्ने नि वि संघ पत्र युद्ध नेपाली जनसंपर्क समिती अमेरिकाको भोली हुने ? महाधिबेशन प्रती लक्षित पाईला हो । माथी भनिए जस्तै, वर्तमान सभापतीले गर्ने अधिवेशन नमानिने प्रकृयाको पहिलो प्रयास-जवाफ हो, यो । कुनै मानेमा प्रवासमा संगठन खोलिनु नराम्रो त होईन तर, भईसकेको संगठनमाथी समानन्तर संगठन बनाउनु भनेको नेजसका ईमान्दार कार्यकर्ता रुवाउने बाहेक केही होइन । यसैले ने वि संघको समानन्तर समितिको पत्र फ्यांकेर जनसंपर्क समितिमा आ-आफ्नो स्थान-रवाफ देखाउने शुरुवाती ट्रायल हो ।
नेपाल बिद्धार्थी संघका सभापती नैनसिंह महर केही समय पहिला अमेरिका आउंदा आफ्ना विश्वाश पात्र महेन्द्र शाहलाई ने वि संघ, अमेरिकाको शाखा सभापती बनाएको पत्र थमाएर गएका थिए । त्रि-चन्द्र कलेजमा सकृय राजनीति गरेका र सभापती महरका छिमेकी शाहको नियुक्ती भएको पत्रले किन बन्या होला, ने वि संघ, अमेरिका भन्ने संस्था ? जबकी नेजसको यो हालत छ भन्ने बिषय नउठेका होईनन । एउटा लहड, सभापती घुम्न आएको बेलामा यसो र संगठन विस्तारका नाममा शाहले जिम्मेवारी पाए होलान ! जिम्मेवारी पाए पछीको पत्र छापिने बाहेक शाहले ने वि संघ, अमेरिका शाखाको नाममा के कती सामुदायिक-शैक्षिक काम गरे, त्यो ने वि संघ केन्द्रीय कार्यालय वा शाह जानुन ।
पार्टी र वर्गीय संगठनहरु स्थापना भएपछी ‘नगरिने मुल्याकंन’ले नेपाली कांग्रेसको यो हविगत भएको हो । शाहको नियुक्तीले विस्तार र मुल्यांकनको स्यावासी वा गाली पाउंदा नपाउंदै ने वि संघ सभापती महरकै प्यानलमा मिलेर महामन्त्रीको चुनाव जितेका कुन्दनराज काफ्लेको नाममा आएको अर्को चिठीमा न्यूयोर्क नै बस्ने प्रभात सापकोटा ने वि संघ, अमेरिकाका अर्का सभापती भएको पत्रले ने वि संघ भोली विस्तार होस् नहोस्, हार्वर्ड, याल, एमआईटी, युसीएलए, बिवाईयु जस्ता कलेजहरुमा कलम र मशाल अंकित झन्डा पहराउन वा ने वि संघ अमेरिका, कलेज ईकाई समितीहरु बनुन वा नबनुन, यो समानन्तर समितिले अझै पनि बांकी रहेका दुई चार जना नेजसका कार्यकर्ता रुवाउने बाहेक केही लछार पटार लगाउंदैन, यो लेख पढ्ने बित्तिकै नतीजा हाता नलाग्ला, तर केही बर्ष पछी हेरे हुन्छ, परिणती ।
ब्यक्तिगत रुपमा यो आलेख न मित्र सापकोटाप्रती लक्षित छ या न मित्र शाहप्रती परिलक्षित । एउटा वेव पोर्टलमा यहाँहरुले प्राप्त गरेको रातो चिट्ठीको चर्चा गरेर न यहाँहरुलाई ठेस लाग्छ, न नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउंछ । ब्यक्तिगत रुपमा शाहजीलाई पंक्तिकारले चिनेको पनि छैन, जती सापकोटाजीसंग प्रत्यक्ष हिमचिम थियो, छ । तर परिपाटी रुवाउनी होइन हसाउनी गर्नुभयो, मित्रहरुले भने हामीजस्ता भारेभुरेहरुका दुईचार मिनेट खेर जाने थिएनन । आफ्ना आकांक्षाहरु हुन्छन, मान्छेका । न म शेरबहादुर, न म रामचन्द्र । शेरबहादुर र रामचन्द्रहरुले जे गरे राम्रा या नराम्रा । सापकोटा र शाहहरुले प्राप्त गर्ने राता चिठीहरुको सान्दर्भिकता बुझ्नुपर्छ भन्ने मित्रवत सुझाव हो ।
यो लेख यो बिषयको पहिलो वा दोस्रो भयो होला । तर ने वि संघको नाममा अमेरिकाको नेपाली समुदाय लक्षित रातो पत्रे क्षेप्यास्त्रले छातीमा लागी जीवन उडाउने कांग्रेस समर्थकहरुकै हो । शेरबहादुरजीको छांया सम्झेर महर र रामचन्द्रजीको छांया सम्झेर काफ्लेले पठाएका पत्रहरुका बैधानिकता जांच्नु जरुरी छ । हावामा उडेका प्रेम पत्र जस्ता होईनन, पार्टी र संगठनका पत्रहरु ।
अन्तमा, आफुलाई मन नपरे सम्बन्धै जोड्न नखोज्ने नेजसको नेत्रित्वपंक्ती । पंक्तिलाई भजाएर भोली नेता बन्ने सपना बुन्नेहरु र तिनले राती काम गर्दै सोच्ने खुराफात, घण्टा हान्दै हान्ने झेल, ट्याक्सी चलाऊंदै चलाऊने बैभव, पिजा पकाउंदै पकाउने आपसी दुश्मनी, अनलाईन लेख्दै लेख्ने चाकरीवाज, नान हान्दै हान्ने लान्छना, आईब्रो गर्दै गरिने हाइ-ब्रोले नेजस यसरी कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी थल्थलिएको छ कि, यो थल्थलाईको मसाज गर्न स्वर्ग वा नर्कमा कता कता छन ; भट्टराई, गिरिजा, सुबर्ण र विश्वेश्वर नआई निको हुनेवाला छैन ।
(पंक्तिकार नेजस अमेरिकाको निर्वाचित केन्द्रिय सदस्य र प्रचार विभाग प्रमुख हो । यी यस्तै खुराफातका परिघटनाले पंक्तिकारले लाजनिती छोडिसकेको छ । त्यसैले लेख कसैप्रती मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ ।)